Mpanamboatra sy mpamatsy rano azo alentika any Shina Mincing | KAIQUAN
Mikoriana: 10-320m3 / h
Loha: Mahatratra 34m
Sarobidy PH: 4 ~ 9
Ny paompy dia tsy azo ampiasaina amin'ny haino aman-jery potika manimba sy lehibe .:
Tombontsoa azo avy amin'ny rano maloto azo alentika:
1. Modely fanapahana mahaleo tena, asa fanapahana tsara, tsy mora sakanana. Raha mbola azo idirana avy amin'ny seranan-tsofina dia azo tapatapahana mora foana. Fitaterana rano maloto malefaka, tanky septika, maloto hopitaly ary haino aman-jery hafa misy kofehy lava sy manify. Tsy azo entina ireo sombiny lehibe. Ny fiasa shredding dia afaka manakana ny paompy sy ny fantsona tsy ho voasakana amin'ny fako ao anaty loto. Na izany aza, mba hahazoana antoka bebe kokoa ny fahamendrehana amin'ny paompy dia ilaina ny mametraka fitaovana fanakanana loto amin'ny tontolo ivelan'ny medium.
2. Ny maodely fanapahana dia vita amin'ny vy vy ary nandalo fitsaboana hafanana. Ny hodi-kazo dia manana hamafiny ampy ary afaka mitazona fahaizana manapaka mafy mandritra ny fotoana maharitra. Raha mihena mandritra ny fotoana maharitra ny fahaizan'ny shredding dia azo soloina misaraka ny maody fanapahana.
3. Na ny lafiny paompy na ny ilan'ny motera dia asiana tombo-kase mekanika hahatratrarana fiarovana azo antoka roa sosona azo alentika ho an'ny motera. Ny menaka ao amin'ny efi-solika dia mihosotra tanteraka ary mampangatsiaka ny tombo-kase mekanika.
Teo aloha: Paompy misaraka KQSN
Manaraka: Axial azo asitrika, paompy mikoriana mifangaro
Tabilao Structural Pump Mitroka ao anaty rano azo alentika
Mincing Submersible Sewage Pump Spectrum diagram sy famaritana